The Motorola Moto One na-eze oru na Spain | Gam akporosis
Edere Ferreno | | Motorola
The Motorola Moto One bụ ika mbụ gam akporo Otu ekwentị. Ihe nlere nke enyere n’ihu na njedebe nke August, na nke ị nwere ike ịmụtakwu ebe a. Mgbe ekpughere ya, ndị ọrụ na-atụ anya ịmalite ahịa ya. Ma ugbu a, ọ bụ oge nke Spain, ebe ngwaọrụ amalitelarị ịmalite ọrụ.
Na mpempe akwụkwọ anyị na-ahụ etiti dị n'etiti nke ruru mpi na ụdị dị ka Xiaomi Mi A2. Ya mere, a Motorola Moto One na-agba ọsọ na ụfọdụ mara mma dị ike ndị asọmpi. Mana ekwentị nwere ike ire ọfụma.
Ndị nwere mmasị ịzụrụ ekwentị a na Spain agaghị echere ogologo oge. Ebe ọ bụ na ya igba egbe na mba anyị bụ ugbua ukara, ị nwere ike ịzụta ya ugbu a na ọkwa. A na-ere ya na ebe a na-ere ere maka ekwentị, ma n'ụlọ ahịa na ntanetị.
Ya mere, ndị nwere mmasị na Motorola Moto One nwere ike ịchọta ya na ụlọ ahịa dị ka Amazon ma ọ bụ Mediamarkt, na mgbakwunye na Fnac na ọtụtụ ndị ọzọ. Yabụ na ọ gaghị esiri gị ike ịchọta ekwentị na ebe ire ere na Spain.
Ọnụ nke Motorola Moto One bụ euro 299. Ọ bụ ụgwọ a na-anabata maka etiti etiti na klas ya, ọ bụ ezie na ọ ga-ekwe omume na nke a nwere ike ịrụ ọrụ megide ya. Ebe ọ bụ na ndị ọrụ nwere ike ịkụ nzọ na nsụgharị dị ọnụ ala karịa na nso a, ha na-ejikwa gam akporo Otu.
Ọ bụ ezie na Motorola jisiri ike laghachi na akara mbụ nke ndị nrụpụta ahịa na-erewanye mma. N'ihi ya, ọ dị o yikarịrị ka Motorola Moto One a na-enyere mmụba a na ahịa. Ọ ga-atọ anyị ụtọ ịhụ ka ndị ahịa na Spain si enweta ya. Kedu ihe ị chere gbasara etiti a na gam akporo Otu?
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » Motorola » The Motorola Moto One rutere Spain
Gbanyụọ amamọkwa ngwa na gam akporo
A free ochie gbaa 'em elu na akpa uwe mwakpo maka gam akporo gị